प्रचण्ड–नेपालहरू बाहिरिएपछि पार्टी अनुशासित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबि – Reporters7.com | Nepal's News Portal | Online News Portal from Nepal
Home /प्रचण्ड–नेपालहरू बाहिरिएपछि पार्टी अनुशासित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबि
राजनितीJanuary 29, 2021
प्रचण्ड–नेपालहरू बाहिरिएपछि पार्टी अनुशासित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–दाहालरूपी पिलो निस्केर गएपछि पार्टी अनुशासित भएको बताएका छन् । पार्टीबाट पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल निस्केर गएपछि अनुशासित हुँदै आएको बताए । आफूनिकट रहेका ट्रेड युनियन महासंघको भेलालाई काठमाडाैंमा सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘प्रचण्ड–नेपालहरू बाहिरिएपछि सबैभन्दा अनुशासित पार्टी बनेको छ । सबैभन्दा अनुशासित पार्टी आज हाम्रो पार्टी हो, हिजो सबैभन्दा अराजक पार्टी हाम्रो थियो । किन रहेछ भनेको त्यही पिलो रहेछ,’ ओलीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लोपटक आफ्नो सरकार ढाल्ने प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू भएको आरोप लगाउँदै अहिले पार्टीबाट बाहिरिएपछि अनुशासित पार्टी बनेको बताए । उनले प्रचण्ड कतै जाने ठाउँ नभएको समेत दाबी गरे । प्रचण्डको कतै चुनाव लड्ने ठाउँ पनि नभएको उनको दाबी थियो ।
‘प्रचण्डको कतै चुनाव लड्ने ठाउँ पनि छैन, पहिला रोल्पा जानुभयो, सिराहा जानुभयो त्यसपछि चितवन अब अन्त जाने ठाउँ छैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड जंगलमा नबसेर दिल्लीतिर बसेको पनि आरोप लगाए । ‘उहाँ हिजो जंगलमा होइन, दिल्ली बसेर कपालमा जेलवाल तेल लगाएर बस्नुभएको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप थियो । प्रचण्ड र माधव नेपालप्रति निकै आक्रामक भएका ओलीले पारिवारिक समाजवाद आएको पनि दाबी गरे ।
घरबेटी र परिवारका लागि समाजवाद आइसकेको दाबी गर्दै ओलीले जनयुद्ध लडेकालाई भने समाजवाद नआएको बताए । उनले यसअधि कहिल्यै सूर्य चिह्नमा चुनाव नलडेकाहरूले सूर्य चुनाव चिह्न चाहियो भनेर दाबी गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । ‘एकपटक सूर्य चिह्नमा छाप नलाएका मान्छेहरू मेरो हो चुनाव चिह्न रे ! कहिलेबाट तपाईको सूर्य चिह्न ? पार्टी छाडेपछि मेरो सूर्य चिह्न,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले प्रचण्डलाई २०७४ मा चितवनमा आफूहरूले जिताएको दाबी समेत गरे ।
‘ठूलाठूला सभा गरेर हामीले लौन भोट हाल्दिनुस् भनेर हामीले जिताएको हो, २०७० मा बत्ती निभाएर बाकस साटेर जिताएको हामीले हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले सरकारलाई काम नै गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको समेत बताए । ‘अघिल्लोपटक पनि सरकार ढालेर काम गर्न दिएनन्, योपटक पनि त्यही नियति दोहो¥याए,’ ओलीको भनाइ थियो । उनले आफू अझै कमजोर नभएको समेत दाबी गरे । दुई मिर्गोला फेरर झन स्वस्थ्य भएको पनि उनको दाबी थियो । नागरिक न्युज।